युगसम्बाद साप्ताहिक - जेनेभामा उठेको ग्रेटर नेपालको आवाज - यादब देवकोटा
Sunday, 04.05.2020, 03:20pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 03.18.2019, 04:43pm (GMT+5.5)
नेपाल खण्डिकरणको चाहना गर्नेहरु सल्बलाइरहेका बेला २०० वर्षअघि नेपालले गुमाएको भूभागको मागले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च पाएको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक ग्रेटर नेपाल र भारतको थिचोमिचोका बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको बैठकमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आवाज उठाएको छ । सो मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले जेनेभामा सम्बोधन गर्दै भारतले नेपालमाथि मानवअधिकार र मानवताको मूल सिद्धान्तको उल्लंघन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र विपरीत नेपालमाथि थिचोमिचो गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भारतबाट सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री अनुसार सुगौली सन्धि खारेज गरेकाले नेपालको ६० हजार वर्ग किमिभन्दा बढी भूभागमा कब्जा जमाएर बसेको बताउँदै सो भूमि नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सुगौली सन्धिले झण्डै अहिलेको आधा नेपाल गुम्न पुग्यो । तर, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले “हामी जसरी भारत आएका थियौं त्यसै गरी जाँदैछौं” भन्दै तमाम सन्धि तथा सम्झौताहरू अमान्य हुने बताएको थियो । त्यस्तै सन् १९५० मा नेपाल र भारतीबीच भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को प्रावधान बमोजिम पनि सुगौली सन्धि स्वतः खारेज भएको छ । तर, यो व्यवहारमा लागू छैन ।
नेपालले भारतका कारण भोगिरहेका अनगिन्ती समस्याहरूमध्ये राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित मुद्दाले सवै नेपालीको मन मस्तिष्क घोचिरहेको छ । सुगौली सन्धिका कारण गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता पाउनुपर्ने दावी राष्ट्रवादी आन्दोलनका अगुवाहरूले गर्दैछन् । भारतलाई थाहा भएको कुरा के हो भने सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धि समाप्त वा रद्द भएको मनिन्छ ।
सन् १८१६ मार्चमा सुगौली सन्धि हुँदा भारतमा ‘ब्रिटिस–इण्डिया कम्पनी’ ले राज गरिरहेको थियो । नेपालले गरेको उक्त सन्धि भारतसित नभएर बेलायतसित हो । तैपनि नेपालका शासकहरूले यस विषयमा भारतसंग चुँइक्कसम्म गर्न सकेका छैनन् । नेपालभित्र मात्र होइन यस विषयमा भारतभित्रै (जहाँ नेपाली भाषीहरूको बाहुल्यता छ) ‘ग्रेटर नेपाल’को आन्दोलन चलिरहेको छ ।
सुगौली सन्धिका कारण नेपालको एक तिहाई भूभाग भारतमा गाभिएको छ । पुरानो नेपालको नक्सा अनुसार नेपालको सीमाना भूटान र बंगलादेशसंग जोडिएको छ । नेपाली पक्षले यस विषयमा भारतसंग कुनै कुरा राखेको छैन । सन् १९५० को सन्धिदेखिख भारतसंग भउका तमाम सीन्ध, सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्न बनेको इपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेको छैन । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेपछि भारतकै कारण नेपालले हालसम्म ६६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गुमाउनु परेको छ । भारतले नेपालको २४ जिल्लाको ६१ स्थानमा सीमा मिचेको छ । भारतले पश्चिमको कालापानीमा एकै स्थानमा ३७ हजार हेक्टर भूमि मिचेको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार हेक्टर भूमि हडपेको छ ।
सन् १९५० को सन्धिलाई दुवै देशको राजनीतिक तहले जति बढी महत्व दिए पनि नेपालले गुमाइरहेको आफ्नो भूमिका विषयमा भने चासो देखाइएको छैन । बरू वदलामा सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी स्थानमा सीमा विवाद समाधान भएको भन्दै नयाँ नक्सा तयार गर्ने काम समेत विगतमा भयो । १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल कसरी ठगिएको छ ? नेपाल कुन क्षेत्रमा बढी पीडित छ ? भन्ने प्रश्नहरू अहिले मुलुकको राजनीतिक–बौद्धिक क्षेत्रले निकै चासो दिइरहेको विषय हो । इपीजीको बैठक र त्यसको प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा उल्लेख छ । त्यो प्रतिवेदन नेपालको पक्षमा बढी हितकारी भएको भन्दै भारतले अस्वीकार गरेको बताइन्छ ।